“Mamo ’ndray ny misionera”: manamarika ny fiverenany ny Diosezy | NewsMada
“Mamo ’ndray ny misionera”: manamarika ny fiverenany ny Diosezy
Tsy miverina angamba fa manohy ny lalany… “Mpisava lalana, tsy mifidy kianja ary mamela ny diany”, hoy ny famaritan’ny mpikambana ny vondrona Dio-XVI (Diosezy). Vao nitsoka kelikely ny rivotry ny hip-hop no nitsangana ny vondrona Dio-XVI. Nivoaka avy tao rahateo ireo tarika nanamarika voalohany ny tantaran’ny rap gasy, toa an-dry Da-Hopp sy ny 18.3.
Taona maromaro aty aoriana, heno tsikelikely niverina eo amin’ny tontolon’ny “haintso haintso/rap gasy” ny vondrona Diosezy. Nanome fotoana tao amin’ny pejy Facebook izy ireo, omaly tamin’ny 6 ora hariva, fa hisy ny zava-baovao hozaraina.
Izay nitsidika ny pejy, nihaino sy nankafy. “Mamo ’ndray ny misionera”, rakitsary vaovao notontosain’ny Diosezy, nozarainy voalohany ho an’ny mpankafy. Manaporofo zavatra maro ity rakitsary ity. Voalohany, mbola ireo ny “mpisava lalana” izay manohy ny diany. “Misionera, miaramila…”, manana andraikitra amin’ny fampielezana ny “haintso haintso taranja” ireto mpanakanto “zokiny” amin’ny taranjany ireto. Faharoa, mbola porofo fa miaina ny fivoaran’ny teknolojia sy ny mozika izy ireo kanefa mitazona hatrany ny efa tsara nataony tany am-boalohany.
Mandray anjara ao anatin’ny hira sy ny rakitsary ireo mpikambana nanainga ny vondrona tao Antsahabe tany ambadiky ny 20 taona lasa, toa an-dry Skam Jah, Tax Bouta, DRB, Tongue Nat, Jento, Xtah, Bambs, Ben J, sns. Hanaraka tsy ho ela ny vaovao hafan’ny Diosezy, raha ny fampanantenan’izy ireo hatrany.